Balwo - Gpedia, Your Encyclopedia
Balwo (Af carabi: بلوه) waa nooc ka mid ah heesaha Soomaalida. Balwo waa heesihii ugu horeeyay ee jacayl iyo kalgacal ku salaysan kuwaasi oo muusik loo garaaco. Markii ugu horeeysay, heesahan waxaa sameeyay Aabaha Fanka Soomaalida Cabdi Deeqsi Warfa. Heesaha Balwo waxay ka bilaabmeen magaalada Borama, gobolka Awdal wakhti lagu qiyaaso intii u dhaxaysay 1940 ilaa 1945kii.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Balwo&oldid=167535"